Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » 'Swa Kachasị Nnukwu Mmiri Worldwa na-abịa ebe ọzọ?
Ebe ntụrụndụ ọhụrụ nke mmiri mmiri ga-agụnye ọdọ mmiri na-asọ asọ mmiri kachasị ukwuu na Hoakalei Resort na Ewa Beach, tinyere South Shore nke Oahu na Hawaii amalitela.
Ebe ndị njem nlegharị anya nke Hawaii batara n'ike nke “ga-enwerịrị” maka ndị ọbịa na ndị bi na ya.
Mmiri ọdọ mmiri Wai Kai Wave, ga-abụ ihe na-adọrọ adọrọ nke US $ 300 nde mkpọsa, iri nri, na ebe ntụrụndụ.
Ebe obibi ohuru ohuru Hoakalei na Ewa na-eto eto nke Oahu ga-agụnye oke lagoon 52-acre.
Mmiri ọdọ mmiri a na-asọ asọ na Wai Kai nke ụwa ga-abụ ihe na-adọrọ adọrọ nke US $ 300 nde mkpọsa, iri nri, na ebe ntụrụndụ na-adabere na ọdọ mmiri 52-acre. General Contractor, Layton Construction, nke ya na Rosendin rụkọtara iji wuo eletriki na nfuli ọdọ mmiri dị elu, ọdọ mmiri na-efegharị mmiri, ma mepụta ụzọ dị ala iji chịkwaa oke ebili mmiri maka ndị ọkaibe niile.
Ha ga-ewukwa eletriki niile, telecom, na nke ọdịyo / nke na-adịghị ahụkebe na ụlọ ndị esonyere na nke mbụ nke ogige ntụrụndụ 277,300. Nke a gụnyere iwu isi na shea maka bungalows isii a ga-ewu gburugburu lagoon na ịtọlite ​​ikike izugbe na ọkụ gburugburu ogige ahụ, gụnyere ebe a na-adọba ụgbọala na nhazi ala, usoro ọkụ na nchekwa, yana ọdụ ụgbọ eletrik na-ebu ọkụ.